संविधान संशोधनबारे एमालेको निर्णय के होला ? बैठक बस्दै - HAMRO YATRA
संविधान संशोधनबारे एमालेको निर्णय के होला ? बैठक बस्दै
काठमाडौ, फागुन । सरकारले संसदमा पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन दिने–नदिनेबारे प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले बुधबार निर्णय गर्दै छ । त्यसबारे छलफल गर्न उसले बिहान ११ बजे संसदीय दलको बैठक र दिउँसो विपक्षी नौ दलको बैठक बोलाएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
सरकारले सोमबार निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि असन्तुष्ट बनेको मधेसी मोर्चाका नेताहरूले भने सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरे । उनीहरूले बुधबार मधेस बन्दको घोषणा गरेका छन् । मोर्चालाई पनि सहमतिमै लिएर निर्वाचनमा जाने, संविधान संशोधनको विषय टुंगो लगाउने र स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने विषयमा सर्वदलिय बैठकमा छलफल भएको छ ।